कैलालि तनावग्रस्त, कर्फ्यु अवज्ञा, आगजनि, सिडियो फिर्ता – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
कैलालि तनावग्रस्त, कर्फ्यु अवज्ञा, आगजनि, सिडियो फिर्ता
थरूहट पार्टिकाका कार्यकर्ताहरूले आन्दोलन चर्काए पछि स्थानीय प्रशासनले सम्भावित क्षति रोक्नका लागि मंगलबार कर्फ्यु लगाएको थियो। कैलालिको धनगढि नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र लगाएको कर्फ्यु पनि सोमबार भएको हत्याको घटना बाट आक्रोशित भनेको भिडले अबज्ञा गर्दै विभिन्न घरहरु आगजनि गरेका छन् ।
प्राप्त समाचार अनुसार :
सभासद जनक चौधरिको घरमा आगजनि भएको – छ उनि कैलालि क्षेत्र नम्बर १ का सभासद् हुन । सुरक्षाकर्मिले सो आगो नियन्त्रणमा लिइ सकेको समाचार छ।
रेशम चौधरिले सञ्चालन गरेको फुलबारि एफएम र फुलबारि रिसोर्ट मा पनि आगलागि गरिएको छ । रेशम थरुहट संघर्ष समितिका अगुवा हुन।
बजारका २ ओटा घुम्ति पसलमा पनि आगजनि गरिएको खबर छ।
धनसिंहपुर ४ र टीकापुरको बनगाउँका केही घरहरु जलाइएको खबर सेतोपाटिले लेखेको छ।
सेतोपाटिका अनुसार उत्तेजित भिडलाइ भगाउन ८ राउण्ड हवाइ फायर पनि गरिएको खबर छ ।
कान्तिपुरका अनुसार भर्खरै कैलालिका प्रमुख जिल्ला अधिकारि राजकुमार श्रेष्ठलाइ मन्त्रि स्तरिय निर्णय गरि फिर्ता बोलाइएको छ । उनलाइ शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारि भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै फिर्ता बोलाइएको हो।
हिजो सोमबार भएको झडपमा कम्तिमा आठ जनाको ज्यान गएको बताइएको थियो । कैलालिकि नेकपा एमाले सभासद रवनि चौधरिले मिडियामा एक तर्फको मात्र खबर आएको र उनले भारतबाट ४ ट्रक मानिसहरु आएको कुरा पनि सुनेको बताइन । उनले प्रहरिले गोलि चलाए पछि मात्र झडप भएको सुनेको पनि बताइन । नेकपा एमाओबादिका सभासद मानबहादुर थारुले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको बारेमा आफुलाइ जानकारि नभएको पनि बताएका छन् ।
भर्खरै प्राप्त खबर अनुसार देशका प्रमुख चार राजनितिक दलहरुले टिकापुर घटनाको दोषिलाइ कारबाहि गर्ने माग गर्दै संबिधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार विहान कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको एक बैठकले सो घटनालाइ निन्दनिय घटना भनेर दोषि पत्ता लगाइ कारवाहिको माग गरेको हो ।
डिआइजिहरु पनि हेडक्वाटर तानिए
सिडियो पछि सुदूरपश्चिमका नेपाल प्रहरि र सशस्त्र प्रहरीका डिआइजिहरु पनि हेडक्वाटर तानिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका डिआइजि रामकुमार खनाललाइ हेडक्वाटर बोलाएर उनको स्थानमा माधव नेपाललाइ पठाइएको छ भने सशस्त्र प्रहरिका डिआइजि खडानन्द चौधरीको स्थानमा सुरज श्रेष्ठलाइ पठाइएको छ।
यो ब्लगमा दिर्घको प्रयोग हुँदैन ‘सजिलो नेपालि‘ प्रयोगको लागि !
This entry was posted in Politics and tagged Kailali. Bookmark the permalink.
← टिकापुरमा ८ को मृत्यु, सेना परिचालन
ह्रस्व दिर्घका कारण इन्टरनेट खोजिमा समस्या, समाधान के होला ? →
One thought on “कैलालि तनावग्रस्त, कर्फ्यु अवज्ञा, आगजनि, सिडियो फिर्ता”
निता ढुंगाना कता हराइन ?